भीम श्रीस काकालाई दुलही खोज्न जाँदा झिसमिसेको अँध्यारोमा मलाई कुकुरले तिघ्रामा उसका चार दाँत गाडेको थियो । त्यो दुखाइको तीव्रताको स्मरण हाल गर्न त सकिन्न तर दाँतको निशान ६ महिनासम्म रहिरह्यो । आजको मितिसम्म कुकुरले ३ पटक दाँत गाडिसकेको छ । त्यसैले होला मलाई उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ–उनको परमाणु बमसँग खासै डर लाग्दैन तर गाउँघरमा पुच्छर हल्लाएर लखरलखर डुल्ने कुकुरहरूसंँग बहुत डर लाग्छ ।
ती दिनहरूमा काकालाई उत्पात बैंस चढेको थियो । जसरी पनि बिहे गरेरै छाड्ने उहाँको संकल्प थियो । राइट दाजुभाइले जसरी विमान उडाउने संकल्प गरेका थिए, काकाको संकल्प नि त्यस्तै कडा थियो, बिहे गर्ने । भएका–नभएका गफ दिएर केटी फकाउने कला मसँग प्रचुर मात्रामा भएको कुरामा काकालाई कुनै सन्देह थिएन । काकाको बिहे भइहाले मज्जासँग हाँसको मासु खान पाइएला भन्ने मेरा पनि आफ्नै किसिमको स्वार्थ थियो ।
दुलही खोज्न जाँदा मुख्य कर्ता म नै हुन्थें । दुलही खोज्ने क्रममा गाउँमा हल्ला चलेको केटीको घरमा वास माग्न जाँदा केटीका बा–आमाले के भन्लान् भन्दा पनि त्यो घरमा कुकुर होला कि नहोला भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो किनभने म आफ्ना शरीरमा कुकुरका दाँतहरू पटकपटक गाडिएको सहन सक्दिनथें । घरजम गर्ने काकाको चाहनालाई पूरा गर्नका निम्ति मेरा तिघ्रा र पाखुराहरू कुकुरलाई टोकाउनैपर्छ भन्ने पनि थिएन ।
कुकुरले मलाई चर्को आवाजमा भुक्दै खेदाएका कारण काकाको दुलहा बन्ने सपना लामो समयदेखि पूरा हुन सकिरहेको थिएन । फलस्वरूपः कुकुरले मलाई ५ किलोमिटर परसम्म खेदाएको थियो । रिसको झोकमा एकदिन काकाले मलाई भन्नुभयो, ‘दश महिना जति भइसक्यो यार, खै तैंले केटी मिलाएको ? आज मिलाउँछु भन्छ, भोलि मिलाउँछु भन्छ, पर्सि त पक्का मिलाउँछु भन्छ । यहाँ आफूलाई तनाव भइसक्यो ।’ काकाले थप्नुभयो, ‘म त हेन्डसम छु, तँ नै चोर जस्तो देखिएको कारण मैले केटी पाउन सकिनँ । कुकुरले तँलाई चोर जस्तो देखेर खेदाएको हो ।’
अन्तिममा काकाकै मुखारविन्दबाट चोरको संज्ञा पाएपछि एकबारको जुनी फिक्का–फिक्का लाग्न थाल्यो । तर मैले हिम्मत हारिनँ । मीठा–मीठा कुरा गरेर केटी फकाउने काम जारी नै राखें । तिनताका यस्तो चलन थियो कि, ‘आफूलाई मन परेकी केटीको घरमा वास बस्न जाने, तिनका बा–आमालाई टन्न कुखुराको मासु र दारुपानी खुवाएर हिमचिम बढाउने र उज्यालो हुन नपाउँदै केटी भगाएर घर फर्कने ।’ तर कुकुरकै कारण कैयांै त्यस्ता योजनाहरू सफल हुन सकिरहेका थिएनन् । केटीको मन पगाल्न मध्यरातमा कानमा खस्याकखुसुक मात्र हैन, गीत समेत गाउनुपर्ने । मध्यरातमा गीत गाउँदा कुकुर चम्केर गाउँ नै थर्काएर भुक्ने । बडो फसाद !
आखिरीमा काकाको बिहे पनि हुन सकेन । मलाई कुकुरले खेदाउन पनि छाडेन । त्यसयता कुकुर प्रजातिसँग मेरो भरोसा टुट्यो । बाटोमा कुकुर देख्यो कि ढुङ्गा उचालेर हान्न थालें । आँटेको काम पूरा हुन नदिने, बेकारमा भुक्ने, टोक्न आउने कुकुरहरू निकै खराब हुन्छन् भन्ने छाप पर्‍यो मेरो मनमा । तर मेरा हजुरबा बेलायती सेनामा काम गरेर फर्किनुभएको थियो । उहाँले मलायासँगको युद्धको समयमा कुकुरकै सहयोगले आफू बालबाल बाँचेको अनेकौं किस्साहरू सुनाउनुहुन्थ्यो । ती किस्साहरू सुनेर पनि कुकुरका बारेमा मेरो धारणा राम्रो बनेन ।
मैले ती युवतीमाथि गडबड गर्छु भनेर कुकुरले सोच्यो होला कि ? के यौन हिंसाको बारेमा कुकुरलाई थाहा हुन सक्छ ? के ती युवतीलाई मैले भन्दा धेरै प्रेम, सहानुभूति कुकुरले दर्साएको हुन सक्छ ?
तर केही दिनअघिको एउटा घटनाले कुकुर प्रजातिका बारेमा मेरा सोचहरू पूरै परिवर्तन गरिदिएको छ । एकपटक मेरा ती कर्महरू, बुझाइहरूका बारेमा गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएका छन् । कुकुरहरू वास्तवमा मानवजातिको रक्षाका लागी जन्मिएका हुन्छन् र तिनलाई माया दिन सक्यो भने मानवजातिको लागि आफ्नो ज्यान पनि अर्पण गर्न सक्छन् भन्ने लाग्यो । यो पढ्दै गर्दा तपाईंहरूलाई लाग्ला, के यस्तो सतही कुरा लेख्या होला यो मान्छेले भनेर । यो सतही हो पनि, हैन पनि ।
बिहानको समयमा सामान्य कसरत गर्ने बानी छ मेरो । यस्तो बानी बसेको ६ महिना जस्तो भयो । त्यो दिन म बिहानै मर्निङ वाक गरेर फर्कंदैथिएँ । सडकको किनारमा एकजना युवती सुतिरहेको देखें । बजार पूरै बन्द थियो । बिहानको समयमा कोही उठ्ने कुरा पनि भएन, केही मर्निङ वाकमा निस्केकाहरूबाहेक अरू कोही थिएनन् सडकमा । यस्तो समयमा एक युवती सडकपेटीमा सुतेको देख्दा मनमा चिसो त पस्ने नै भयो ।
देशमा बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका बेला झन् यस्तो दृश्यले चनाखो त बनाउने नै भयो । हुन त शहर बजारमा सडक बालबच्चाहरू यसरी हिँडेको, बसेको धेरै नै देख्न सकिन्छ । तर झट्ट हेर्दा ती युवती सडकमा मागेर गुजारा चलाउने खालकी हुन् जस्तो लागेन । कुनै विपत् पो पर्‍यो कि भनेर म ती युवती सुतेको स्थाननजिक गएँ । तर उनको साथमा थियो एउटा कुकुर । उनी मस्त सुतिरहेकी थिइन् तर उनलाई सहारा दिइरहेको थियो कुकुरले । र त्यो कुकुरको आँखा र शरीर रातभरि नसुतेको जस्तो थियो ।
त्यो कुकुरले ती युवतीको लुगा आफ्ना दाँतहरूले च्यापेर बसिरहेको थियो । म ती युवतीलाई उठाउन जाँदा मलाई कुकुरले खेदाउँथ्यो । मैले फेरि ती दिनहरू सम्झें जतिबेला काकालाई दुलही खोज्न जाँदा मलाई कुकुरले ५ किलोमिटरसम्म खेदाएको थियो । मेरा तिघ्रा र पाखुराहरूमा दाँत गाडेको थियो । ती दिनहरू सम्झेर मलाई फेरि पनि रिस उठ्यो । फेरि पनि कुकुर प्रजातिसँग घृणा जाग्यो । तर यतिबेला मेरो चेतनाको स्तर भने अलिक फरक थियो ।
त्यो के भने आज कुकुरले मलाई किन खेदायो, किन टोक्यो त्यो अहिले म महसूस गर्न सक्छु । कुकुरका बारेमा मन्थन गर्न सक्छु । हिजो पनि कसैको रक्षाका निम्ति कुकुरले मलाई खेदाएको हुनुपर्छ । तिघ्राहरूमा दाँत गाडेको हुनुपर्छ किनभने त्यो कुकुरको ‘कमन सेन्स’ ले त्यतिबेलाको हाम्रो योजना थाहा पाएको हुनुपर्छ । अरूको घरमा कोही नयाँ मान्छे किन घुस्छ ? रातिराति किन हल्ला गर्छ ? यी सब कुकुरलाई थाहा हुनेरहेछ । पढ्दा तपाईंहरूलाई हाँसो लाग्ला ।
कुकुरले आज पनि खेदाइरहेको छ । जबजब म सडकपेटीमा सुतिरहेकी ती युवतीलाई अलिक चर्को आवाज निकालेर बोलाउन खोज्थें, उनको साथमा रहेको त्यो कुकुर बडो रिसाएको भावमा आँखा तेर्साएर मसँग आँखामा आँखा जुधाउँथ्यो । उसले भनेजस्तो लाग्थ्यो, ‘तिमी नाथेहरू चेलीबेटीको अस्मिता जोगाउन सक्दैनौ, बरू अवसर मिल्यो भने लुट्छौ । जबर्जस्ती गर्छौ, के हलो हलो हलो गरिराखेको ? गइहाल, यहाँ एक सेकेन्ड पनि नबस ।’
मैले धेरै प्रयास गरें ती युवतीलाई उठाउन तर कुकुरले मलाई पटकपटक अवरोध गरिरह्यो । अब जबर्जस्ती गरौं भनेपनि टोक्ला भन्ने डर । सबैभन्दा त मलाई कुकुरको असली मनोविज्ञान बुझ्ने अवसर प्रनाप्त भयो किनभने कुकुरको फोबिया थियो मलाई । त्यो दिन मैले कुकुरको मनोविज्ञानसँग करीब ३० मिनेटसम्म खेलिरहें । तीस मिनेटसम्ममा बरू मानिसहरूले अडान परिवर्तन गर्लान् तर त्यो कुकुरले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेन । त्यो अडान हो – ती युवतीको छेउमा मलाई पर्नै नदिनु ।
मैले ती युवतीमाथि गडबड गर्छु भनेर कुकुरले सोच्यो होला कि ? के यौन हिंसाको बारेमा कुकुरलाई थाहा हुन सक्छ ? के ती युवतीलाई मैले भन्दा धेरै प्रेम, सहानुभूति कुकुरले दर्साएको हुन सक्छ ? के कुकुरलाई लागेको हुन सक्छ कि केटाहरूबाट यी युवती असुरक्षित छन् भन्ने कुरा ? के कुकुरलाई थाहा भएको हुन सक्छ कि दैनिक रूपमा हुने गरेका बलात्कारका विषयमा ? के ती युवतीको रक्षाका निम्ति कुकुरलाई खातिरदारी देखाउन मन परेको हुनसक्छ ?
यस्ता प्रश्नहरूले मलाई बिथोलिरहे । निकै मुश्किलले एउटा फोटो खिच्न भ्याएँ तर ती युवतीको नजिक जान कुकुरले वन्चित गरायो । तर यसपटक भने म कुकुर प्रजातिसँग रिसाउने पक्षमा थिइनँ । कुकुरलाई ढुङ्गाले हान्ने मनस्थिति पनि बनेन । बरू एकटपक सलाम गर्न मन लाग्यो । कुकुर प्रजातिप्रतिका मेरा कमजोर, कमसल अनि सतही धारणाहरूसँग निकै आत्मग्लानि भयो । हामीले कसैलाई नराम्रो गाली गर्न पर्‍यो भने ‘कस्तो कुकुर जस्तो मान्छे रहेछ’ भन्छौं । तर त्यो गलत रहेछ । वास्तवमा मान्छेहरू कुकुर जस्तो इमान्दार बन्न सकेकै छैनन् ।
कुकुरले छेउमै पर्न नदिएपछि म के गरूँ ? बिहानको समय छ । उपाय केही भएन । ती युवतीलाई घर लग्न पनि त सक्दिनँ । कुकुरका अवरोधका बीच जबर्जस्ती उठाउन पनि मिलेन । अनि अलिक पर प्रहरीहरूले ड्युटी गरिरहेको देखें । सरासर उनीहरू भएतिर गएँ । तर खुशीको कुरा के भने उनिहरूले पनि ती युवतीलाई देखेका रहेछन् । कुकुर पनि देखेका रहेछन् । ती युवती उठेपछि सोधपुछ गर्ने योजना रहेछ उनीहरूको ।
प्रहरीहरूको आशंका थियो, ‘कुनै होटलमा मजदूरको रूपमा कार्यरत हुनुपर्छ यी नानी । मालिक वा सहकर्मीहरूसँग झगडा भएपछि कामबाट निकालिएको वा आफैं निस्किएको पनि हुन सक्छ । हिजो राति मदिरा खाएर यहाँ आई सुतेकी हो कि भन्ने पनि लाग्छ किनभने चप्पलमा हिलैहिलो छ । कहिल्यै नखाएको होला, बढी नै लाग्यो कि !’ प्रहरीहरूको अनुमानसँग असहमति जनाऊँ कसरी ? उनीहरू त राज्यका तालिमप्राप्त, अधिकारप्राप्त मानिसहरू । मैले ‘ए होला, होला’ भनें ।
प्रहरीहरू अलिक परै चोकमा थिए । तर कुकुर भने तिनै युवतीको साथमा थियो । ती नानी ब्युँझेपछि हामी के कसो हो पत्ता लगाएर अभिभावकलाई जिम्मा लगाउँछौं भन्ने आश्वासन मिल्यो र त्यो आश्वासनलाई शंका गर्नुपर्ने स्थिति पनि बनेन किनभने त्यहाँ महिला प्रहरी पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले, ‘म गर्छु भाइ, चिन्ता नगर’ भन्नुभयो । मैले भनें, ‘यो चिन्ताको विषय भन्दा पनि कसैले बलात्कार गरेको पो हो कि, राज्यलाई पनि यो विषयले संकट पारेको छ’ भन्दिएँ । प्रहरीहरू अलिअलि झस्के जस्तो गरे ।
हामी गर्छौं नै भन्ने विश्वास उनीहरूबाट पाएपछि म फेरि पनि युवती सुतिरहेको सडकपेटीमा आएँ । कुकुर सँगै थियो । म फेरि फर्केको देखेर कुकुर फेरि चनाखो भयो । पुच्छर हल्लाउँदै फेरि तिनै युवतीको लुगा टोक्दै घेरा हाल्न थाल्यो । यस्तो लाग्थ्यो, मानौं मैले ती युवतीमाथि आक्रमण गर्न खोज्दैछु र कुकुरले बचाउने प्रयास गर्दैछ । कुकुरले यस्तो भन्दै इशारा गरेजस्तो लाग्यो – ‘तँ निकम्मा मान्छे, गइहाल्, यहाँबाट तुरुन्त गइहाल् । म छु यिनको साथमा र यिनको जिम्मा मैले लिएको छु ।’
अनि म विवश भएर त्यहाँबाट हिँडें, आँखामा आँसु छचल्काएर ।
त्यसको दुई दिनपछिको मर्निङवाकमा फेरि अचम्म भयो । तर यो प्रसङ्ग कुकुरको हैन । यो प्रसङ्ग मानिसको हो । त्यो दृश्य देखेपछि नै मैले एउटा स्टोरी लेख्छु र त्यसको शीर्षक ‘मान्छे जस्तै कुकुरहरू, कुकुर जस्तै मान्छेहरू’ राख्छु भन्ने निर्णयमा पुगें । बिहानकै समयमा दुई दिनको अन्तरालमा देखिएका यी फरक दृश्यहरूले मानिस र कुकुरहरू बीचमा धेरै भिन्नता छ भन्ने सन्देश गजबसँग दिएको थियो ।
अइया, अइया भनिरह्यो असहायले तर कुटाइ रोकिएन । मैले मनमनै सोचें, अब यिनको बिहे देखाइदिनुपर्छ । असहायलाई त यिनीहरूले नछाड्ने नै भए, बोल्यो भने मलाई पनि कुट्छन् । अनि मैले चुपचाप कुनामा लुकेर जूम गर्दै भिडियो खिचिरहें ।
एकजना मनस्थिति गुमाएको मानिस, जसले के गरे के हुन्छ, के बोले के हुन्छ भन्ने थाहा पाउन नसक्ने खालको असहाय थियो । त्यो मान्छे ठीकठाक हुन्थ्यो भने त एक महिनासम्म नधोएको फोहर लुगा लगाए हिँड्ने थिएन होला । ल हिँड्यो रे, त्यो पनि मानियो । तर अरूको पसलअगाडि आएर चिसो भुइँमा सुत्ने थिएन होला । ल सुत्यो रे, त्यो पनि मानौं तर कम्तीमा उसले आफ्नो नाम र ठेगाना त बताउन सक्थ्यो होला ।
यस्तो सुखी मान्छे आफ्नो पसल अगाडि सुत्यो भनेर सडकमा लौरालौराले पशुलाई जसरी कुट्न मिल्छ त ? त्यसरी त पशुलाई पनि कुट्न मिल्दैन । बरू सेवाको भाव छ भने पाटन अस्पतालसम्म पुर्‍याउने काम गर्न सकिन्छ । तर ती साहु महाजनहरूले के गर्दा रहेछन् भने आफ्नो मूड बिगारिदिएको, बिहान बिहान साइत बिगारेको भन्दै लात्तीले तिनको टाउकोमा हान्ने, बाल्टीमा ट्वाइलेटको पानी ल्याएर छ्यापिदिने, लौरोले सर्पलाई जस्तो चलाउने । जा पागल जा, भाग् यहाँ नसुत् साले भन्ने ।
बिचरा उसलाई केही थाहा छैन । शरीरमा दुखाइ भएपछि, चिसो पानीले शरिर भिजेपछि मुखबाट केही आवाज निकाल्दो रहेछ । अईया,अईया भन्दो रछ । म भन्छु, त्यो रोदनको आवाज थियो । एक प्रकारको प्रतिकारको भाष्य थियो । तर आफूहरू जस्तो साहु महाजनलाई मुख छाडेको भन्दै उनीहरूले निर्मम ढंगले पिटिरहे । म बबुरो बटुवा । आक्रोशित साहु महाजनहरूले मेरो कुरा सुन्ने, मान्ने अवस्था रहेन । एएएए, हजुर, असहायलाई नकुट, छोड, यसो नगर भन्ने अनुरोध तिनका लागि बिलौना गरेको जस्तो भयो । तिनले त झन् जोशका साथ कुट्न थाले ।
नजिकै ड्युटीमा रहेका प्रहरी पनि आए । तिनले सत्यतथ्य जान्ने प्रयास नै गरेनन् । तिनले साहु महाजनको अनुहार हेरे, अनि हेरे ती असहाय मानिसको अनुहार । अनुहार हेरेकै भरमा ती प्रहरीले दोषी पत्ता लगाए र झन् कडा तरिकाले कुट्न थाले । अइया, अइया भनिरह्यो असहायले तर कुटाइ रोकिएन । मैले मनमनै सोचें, अब यिनको बिहे देखाइदिनुपर्छ । असहायलाई त यिनीहरूले नछाड्ने नै भए, बोल्यो भने मलाई पनि कुट्छन् । अनि मैले चुपचाप कुनामा लुकेर जूम गर्दै भिडियो खिचिरहें ।
सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसले चर्चा पायो । प्रहरी प्रधान कार्यलयले चासो देखायो । अहिले छानबिन समिति बनेको छ । त्यो समितीले छानबिन गरेर दोषीउपर कारबाही त गर्ला नै । तर यहाँ कोही कारवाही हुने र नहुने भन्दा पनि हाम्रो समाज किन यति धैरै असहिष्णु बन्दैछ भन्ने हो । बरू कुकुरहरूसँग चेनता छ तर मान्छेहरूसँग छैन ।